USimon Beckett kunye nomdlalo wakhe omnyama ngugqirha wezobuchwephesha uDavid Hunter. | Uncwadi lwangoku
USimon Beckett kunye nomdlalo wakhe omnyama ngugqirha wezobuchwephesha uDavid Hunter.
Ifoto yombhali uSimon Beckett: (c) Katrin Binner
Ngelishwa siqale lo nyaka ngendlela emnyama kakhulu. Isisombululo sokunyamalala okungaphakathi komfazi oselula UDiana Quer hayi ngokukrokrela ukuphela kwakhe kunye nokubamba umbulali wakhe ovunyiweyo ebengekho buhlungu kangako. Kwakhona, uphando zivelele kwaye seva amagama anje saponification nabanye iinkqubo zokufa njengendalo kubo njengoko benamagingxigingxi kubemi besitrato. Apha eSpain sinezona zinto zibalaseleyo kwaye andinakukunceda kodwa ndikhumbule le Itetralogy yombhali wesingesi USimon Beckett.
Iwele ezandleni zam kanye kwiminyaka emine eyadlulayo ngelixesha kwaye ndicinga ukuba ndiyifundile ngaphezulu nje kwenyanga. Amatyala akhe Isazi sobuchwephesha obunobuqili uDavid Hunter, protagonist weenoveli, ndandixhomekeke kakhulu njengoko ndandinomdla (kuba uloyiko luhlala luthanda) inkcazo enzulu kunye neenkcukacha yomsebenzi owenziwa zezi ngcali. Ndiyakumema ukuba ujonge, ngakumbi kwaye kunjalo, abafundi abamnyama.
1 USimon Beckett
2 Uthotho lukaDavid Hunter
2.1 I-Chemistry yokufa (2006)
2.2 Phakathi komlotha (2007)
2.3 Ukuhleba kwabafileyo (2009)
2.4 Ilizwi labafileyo (2011)
3 Ukuqukumbela ...
Beckett Uzalelwe eSheffield kwaye kulo nyaka ugqiba iminyaka engama-50. Wafunda IsiNgesi philology kwaye usebenze ixesha elithile njengotitshala apha eSpain. Ibiyi intatheli wezifanekiso kumaphephandaba amaNgesi aliqela kunye nezinye zeengxelo azenzileyo zasebenza njengesiseko seenoveli zakhe.
Uthengise ngaphezulu kwe 8 izigidi Iikopi zeencwadi zakhe kwihlabathi liphela, enkosi, ngaphezulu kwako konke, kolu ngcelele lwenkqubela phambili kaDavid Hunter. Uye wapapasha iinoveli ezingakumbi, ehlala ngaphakathi kuhlobo olumnyama, kwaye waba ngowokugqibela kumabhaso anje nge Ikrele legolide kwaye uphumelele abanye, njenge Marlowe.
Uthotho lukaDavid Hunter
Ikhemistri yokufa (2006)
UDavid Hunter ngu Inzululwazi ye-anthropologist yaseLondon ekhethekileyo kwinkqubo yokubola kwesidumbu. Uye wasekwa njengogqirha welizwe kwilali yaseNorfolk iminyaka emithathu. Ushiye yonke into ngasemva emva kokuphulukana nenkosikazi yakhe kunye nentombi kwingozi yemoto angakwaziyo ukudlula kuyo. Ubomi bakhe obunoxolo buyatshintsha xa sele ubolile umzimba womfazi omncinci oqhotyoshelwe ngamaphiko Ngasemva.
Amapolisa endawo amcela ukuba ancede, kodwa ingxaki kukuba i imeko yengcinezelo yelali Ngeparanoia eyenziwe ngumfundisi webandla, akazukunceda kwimibuzo yakhe. Kwaye xa umzimba wesibini womnye umfazi uvela, uMzingeli kuya kufuneka asebenze ngokuchasene nexesha. Ngethamsanqa, unabahlobo abaseleyo kwaye uyakwazi ukubuyisa i-a umdla wothando nguJenny, utitshala welali.
Phakathi kothuthu (2007)
U-Hunter uthathe inxaxheba kuphando eGlasgow, kodwa ukufunyanwa kwe isidumbu esitshisiweyo kwisiqithi esincinci esikude se Hebrides kuyamnyanzela ukuba aye apho. Kwinkampani yamapolisa amabini kwaye ngoncedo lomcuphi odla umhlala-phantsi, uyakuthatha inxaxheba kwimfihlakalo yolwaphulo-mthetho olucokisekileyo, apho abahlali abambalwa beziqithi ukuya kuthi xhaxhe kubaphethe indawo.
Ke sibuye kwakhona a indawo evaliweyo neyodwa apho umbhali ephethe ngobuchule abalinganiswa ukwenza ungathandabuzi wonke umntu. Kwakhona uHunter kuya kufuneka athathele ingqalelo ubudlelwane bakhe noJenny, kuba akenzi kakuhle. Ukuphela okumangazayo kwakhona, njengakwinoveli yokuqala, kwaye kuya kuphantse kubize uHunter ngobomi bakhe.
Ukusebeza kwabafileyo (2009)
UHunter umshiye noJenny kwaye ngenxa yesiphelo esibuhlungu sencwadi edlulileyo ugqiba kwelokuba aye kuyo EUnited States. Kufundwe kumnxeba Ifama yomzimbaeTennessee, ekuphela kwendawo emhlabeni apho i-forensics isebenza kwizidumbu zokwenyani. Apho udibana kwakhona nomcebisi wakhe kunye nomhlobo wakhe, ugqirha. UTom lieberman. Bobabini kuya kufuneka bajongane umbulali ongazange abonwe ngubani ongabulali ngokungenalusini, kodwa ikwabonakala ngathi uyazi konke malunga neendlela zobuchwephesha.
Kwakhona imbali iye Iimbali ezintle zilungile kwaye bagcina uxinzelelo maxa onke. Ukongeza, uHunter uya kutsalwa kwiqabane lomcuphi lomhloli ophambili kwityala, kodwa uya kulothuka.
ilizwi labafileyo (2011)
Ago iminyaka esibhozo, xa uHunter wayesatshatile kunye nentombi yakhe, wathatha inxaxheba khangela imizimba yamantombazana amabini wabulawa ngu Ingqondo ebizwa ngokuba nguJerome Monk… Kodwa izidumbu azange zibonakale. Ngoku uHunter ufumana undwendwelo Umhloli iterry, owayebandakanyeka kuphando kwaye engazange ahlangane naye.
UTerry umazisa ukuba U-Monk ubalekile ejele kwaye uHunter kuya kufuneka abuyele endaweni, indawo yasemaphandleni ye-moorland. Umzingeli uyakufumanisa oko Akukho nto ibonakala ngathi kwaye abo babandakanyekayo kwityala banento yokufihla. Kwaye kwakhona sinalo olo qhinga ukusuka ekuqaleni kuye esiphelweni, kunye neemeko zalo eziyingozi kunye nokujika kwayo kokugqibela luphawu lwentengiso lwendlu kaBekett.
A kakhulu uthotho oluhle olumnyama, olunobalisa olutshintshatshintshayo kwaye lufundeka lula. Kubathandi abathanda kakhulu uhlobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » USimon Beckett kunye nomdlalo wakhe omnyama ngugqirha wezobuchwephesha uDavid Hunter.
Ukuseta ngokwesiqhelo abacuphi basetyhini: Amaia Salazar